N’Golo Kante oo dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Kooxda Chelsea, kaddib markii Coronavirus… – Gool FM
N’Golo Kante oo dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Kooxda Chelsea, kaddib markii Coronavirus…
Haaruun June 9, 2020
(London) 09 Juun 2020. N’Golo Kante ayaa dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Kooxda Chelsea, kaddib markii ay soo yaraatay cabsidii uu ka qabay faafaha Coronavirus.
Chelsea ayaa si weyn u diyaar-garoobaysa ka hor bilowga Premier League ee dib u soo laabashada horyaalka, iyadoo N’Golo Kante uu ku soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda koowaad.
Kante wuxuu ahaa hal ciyaaryahan oo ka hadlay walaaca ay qabaan ciyaartooyda kubadda cagta ee ku soo laabanaysa garoomada mudada lagu jiro faafaha Coronavirus, isagoo doortay inuusan si buuxda u tababaran inta ay taagan tahay natiijada xanuunkan Covid-19.
Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in cabsida laacibkan khadka dhexe ay meesha ka baxday, kaddib markii uu tababar la qaatay asxaabtiisa kooxda maanta oo Talaado ah.
29-sano jirkaan ayaa u muuqday mid si fudud u jooga xarunta tababarka Blues ee Cobham, maadaama uu ka qeyb qaatay qaar ka mid ah tababarka, waxaana uu sameyeey goysmo cajiib ah ka hor inta uusan si degan gool u dhalin kulankii tababarka.
Man United iyo Chelsea oo ku tartamaya saxiixa Federico Chiesa oo ka tagi kara Fiorentina… (Kooxdee ku horreysa tartankiisa?)
Dybala oo shaaca ka qaaday saddexd kooxood uu qarka uu fuulay inuu ku biro sanadkii 2019